Indebe yetshokholethi, ukhilimu kunye namandongomane | IBezzia
Indebe yetshokholethi, ukhilimu kunye namandongomane
UMaria vazquez | 08/06/2021 10:00 | Postres
Ukuba bendikuxelele ukuba ungayenza le dessert kwimizuzu eli-10, ungayikholelwa? Le ndebe yetshokholethi, ukhilimu kunye namandongomane ngu enye indlela xa kukho iindwendwe ekhaya. Sinokushiya isiseko setshokholethi esenziwe kwaye songeze ngaphambi kokuhambisa ezinye izithako.
Kuza kubiza malini ukulungisa ezi glasi? Malunga nemizuzu eli-10. Ke, kufuneka ubayeke bapholile kubushushu begumbi okanye zigcine efrijini ukuba awuzukutya ngalo mini. Imousse yetshokholethi Ithambe kakhulu kwaye inokusetyenzwa yodwa, kodwa i-krimu kunye namandongomane anegalelo ekwenzeni le dessert ijikeleze ngakumbi.
Into enomdla yokongeza amandongomane kule dessert yile umahluko wetyuwa ukuba ezi negalelo kwi dessert. Kwaye ukuchukunyiswa okunamandla kwimeko yamandongomane aqhotsiweyo asetyenziswa njenge top. Kodwa ukuba amandongomane ayisiyonto yakho, zive ukhululekile ukongeza iisheyiphu ezimbalwa zetshokholethi, icocoa okanye isinamon ngaphezulu kwekrimu.
1 Izithako zeglasi enye
Izithako zeglasi enye
200 ml yobisi okanye isiselo seamangile
9 g. ingqolowa
10 g. cocoa emsulwa
Beka izinto zokuqala ezine kwisitya: isiselo seamangile, isitatshi sengqolowa, iswekile kunye necocoa. Ke, xuba nezinye iintonga zemanyuwali de zonke izithako zidityaniswe kakuhle.
Thatha isitya kwi-microwave kwaye ishushu ngomzuzu kumandla aphezulu. Emva koko susa kwaye uvuselele ngeentonga ngaphambi kokuyibuyisela kwi-microwave. Phinda usebenze kaninzi kangangoko kufuneka ngoku ngemivumbo engama-30 de umxube uqine. Kwimeko yam yayiyimizuzu emi-4 iyonke.
Xa sele ndikhulile uthele lo mxube kwiglasi kwaye mayipholile kwigumbi lobushushu.
Xa i-cocoa mousse ibanda, uhombise nge-cream cream, imisonto embalwa ibhotolo yamandongomane, isinamoni kunye namandongomane aqhotsiweyo.
Yonwabela iglasi yetshokholethi, cream kunye namandongomane dessert.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iresiphi » Postres » Indebe yetshokholethi, ukhilimu kunye namandongomane
Amaqhinga ama-5 okwandisa ukugcinwa kwikhitshi elincinci
Kufuneka wenze ntoni ukuba iqabane liyaxoka